Abtidoon oo Abtiyadii u Tagay, Oday Bislana Agabka Dhigtay – Rasaasa News
Abtidoon oo Abtiyadii u Tagay, Oday Bislana Agabka Dhigtay
Sep 27, 2009 Abtidoon
Dabangaale tuugiyo colaad looga talo waayey oo toori xiiraysa iyo waran la tiicaaya toddobaatan geelana la tagay taana waan aragnay, Abtidoon wax kasta oo uu sameeyo waa uun Abtidoon aan aqiin.
Waxaa baryahanba joogay dalka Maraykanka Abtidoon oo isagu ka irdhoobay dalka Ingriiska, ayaa waxaa uu damcay in uu dalka Maraykanka ka helo cid salbaaraysa dambiyada uu ka galay dadka Ogadeeniya iyo ehelada Dr.Dolal. Abtidoon waxaa uu kolkii ugu horeysayba masalaha dhigtay Oday Bisle oo ka tirsanaan jiray ururka ONLF, ayna ehel yihiin Dr. Dolal oo sanadka bilowgiisii lagu dilay Ogadeeniya Abtidoona uu ka mid ahaa afarta nin ee ka dambeeyey dilka Dr. Dola.
Oday Bisle, waxaa uu aad uga xun yahay ficilka xun ee uu Abtidoon galay, waxaa kale oo uu aad uga xun yahay maadey oo madi ku ah Maraykanka oo uusan albaabka ka xidhan karin, Abtidoon waa madax gaabni oo ma garto dub ka hadalka. Abtidoon waxaa uu Colorado aaday kaligii, waxaana ehel u ahaa Xuseen Nuur [Garaabo] oo kaliya, waxaan shirka Oromada isagu marna cag soo galinin 4 xubnood oo hore uga tirsanaa golaha dhexe ee ururka ONLF kuna sugan Maraykanka.
Abtidoon, waligii Maraykanka ma tagin intii uu noolaa Dr.Dolal oo u ahaa macalinka halganka iyo indhaha uu ku socdo, waxaase uu aad u farxay kolkii uu maqlay in uu Dolal dhintay, waxaana uu isku dayey in uu gashado shadhkii Dolal.
Waxaa diiday Abtidoon in ay arkaaba xubnaha afarta ah ee golaha dhexe ahaan jiray oo ku sugan dalka Maraykanka, wax wanaag ahana waxaa uu ka waayey Jaaliyadaha Maraykanka oo iyagu aad u neceb Abtidoon iyo saddexda gacan ku dhiigle ee kale. Abtidoon waxaa uu cag dhigi waayey Minneapolis oo ay ka jirto Jaaliyada ugu xooga badan ee ay leedahay ummada somalida Ogadeeniya ee degan dalka Maraykanka.
Abtidoon kolkii uu waayey wax dhurwaaga ka soo xareeya ayaa waxaa uu doontay Abtiyaashii oo ah Ilka yar, oo horena u soo koriyey isaga. Waxaana uu u sheegtay dhibaatada haysata iyo ninka uu yahay kolkaas ayey Ilka yar tidhi “ba,aa oo heedhe anaba Itobiya waan degnaa, oo ONLF waa noqon karaa sow ku taageerne”. Sidaasi ayaa waxaa Abtidoon shir loogu qabtay Colorado oo ah kobta uu Abtidoon ka yidhi “anagaaba Itobiya ah, maxaan xornimo ka rabnaa”, waxaa arnitaas ka yaabay kolkii uu maqlay Da,ud Ibssa, waxaa Da,ud Ibssa ka turjumayey Mr Garaabo, hadab maxaad u malaynaysaan in ay yihiin dadka Maraykanka Jooga ee afka Ingriiska looga turjumayo. Dadkaa loo turjumayaa ma ahayn dad u dhashay ardhulka Somalida Ogadeeniya ee waxay ahaayeen Ilka yar Abtidoon Abtiyadii oo eegga uun soo galay Maraykanka.
Waxaa Abtidoon madaxa u waynaynaya Ina Miraad Layli oo isagu Bogga Ogadennet, iskaga qora wax alaale wixii afkiisa ku soo dhaca, oo aad eegana moodo in uu kiraystay Abtidoon, waa arin laga naxo kolka aad aragtid 10 awoow ugaas oo ugaas galab u adeegaya.
Abtidoon, waxa uu ku ag wareegayaa Abtiyadii, arimaha uu ina miraad sheegay ee ah unuu tagay muu ilaahay ka yaabo, ma waxuu moodi dadka Ogaden in ay indho xidhan yihiin, ogow kolkii ugu dam
arinta Ogaden ururka aduunka waxaa magac qaadkeeda ugu dambaysay 1976, xiligii ay socdeen dagaaladii Jxsg iyo gumaysiga Itobiya.
rasaas baa runta sheegee rafiiqaaga ka yeelo
Car Bal Dadweynow Keebaan Dooranaa?
Shirkii Mashruuca QEF, UK oo si wanaagsan u dhacay iyo shahaado sharaf la guddoonsiiyey
Drought Strikes Ogaden Pastoralists Without Assistance